Yintoni ibrashi yentsimbi engenasici
Inkqubo yokuzoba ucingo iya kuphulukana nobunzima bepleyiti engenasici engenanto ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile, ngokubanzi i-0.1 ~ 0.2mm. Ukongeza, ukusukela oko umzimba womntu, ngakumbi isundu, unemfihlo yeoyile kunye nokubila, ibhodi yokuzoba intsimbi engenazingcingo ihlala ishiya iminwe ecacileyo xa ichukunyiswa ngesandla, kwaye kufuneka icocwe rhoqo.
Umzobo wocingo lwentsimbi engenazingcingo ngokubanzi uneziphumo ezininzi: iphethini yocingo ethe ngqo, ipateni yekhephu, ipateni yenayiloni. Ipatheni ethe ngqo yomtya yipateni engaphazanyiswanga ukusuka phezulu kuye ezantsi, kwaye ngokubanzi kwanele ukusebenzisa umatshini wokuzoba osisigxina ukuhambisa into yokusebenza emva naphambili. Umzekelo wekhephu ngowona uthandwa ngoku. Iqulethwe ngamachaphaza ahlelekile, kwaye inokusetyenziswa nge-sandpaper yezinambuzane ukufezekisa umphumo.
Ipateni yenylon yenziwe ngemigca yobude obahlukeneyo. Kuba ivili lenayiloni lithambile kubume, linokugaya iindawo ezingalinganiyo ukufikelela kwipateni yenayiloni.
Ibhodi yokuzoba ucingo ngokubanzi ibhekisa kubume bomphezulu kunye negama elihlangeneyo. Igama langaphambili ibhodi enqabileyo, kunye nobume bomphezulu kubandakanya imigca ethe tye, imigca engahleliwe (kunye nemigca), amaqhuqhuva nemisonto. Umbala webhodi yentsimbi eyenziwe ngentsimbi yokuzoba bubuso bemibala eyahlukeneyo efunyenwe kukuntywila kwamanzi kweekhemikhali okanye ukucocwa kombala we-ion wokufaka umbala kumbala ongaphantsi weplanga yeplanga yentsimbi engenazingcingo.
1. Ukungabinanto kwawo onke amacandelo kufanelekile, kwaye ukuphambuka okuvumelekileyo kobude becandelo yi-1mm.
2. Izinto kufuneka zitshekishwe ngokuthe tye ngaphambi kokusika, kungenjalo kufuneka zilungiswe.
3. Ngexesha le-welding, i-electrode okanye i-wire kufuneka ibe yoluhlobo olufanelekileyo kwizinto eziza kudityaniswa, kwaye kufuneka kunikwe isatifikethi somzi-mveliso.
4. Eli candelo kufuneka libekwe kwindawo echanekileyo ngexesha lokudibanisa.
5. Ngexesha le-welding, amalunga e-solder phakathi kwezinto kufuneka aqine, i-weld kufuneka igcwele, kwaye i-wave yentsimbi ebusweni be-weld kufuneka ifane, kwaye akufuneki kubekho i-undercuts, ii-welds ezingaphelelanga, iintanda, i-slag, i-weld amaqhuma, ukutshisa, ukukrwela kwearc, iziphene ezinje ngeekratshi zomngxuma kunye neeposi ezifana nenaliti, kwaye akufuneki kubekho sitshizi kwindawo yewelding.
6. Emva kokuba i-welding igqityiwe, i-slag ye-welding kufuneka ikhutshwe.
7. Emva kokuba izinto zidityanisiwe kwaye zidityanisiwe, kufuneka zilungiswe kwaye zipholishwe ngomatshini ophethwe ngesandla ukwenza ukubonakala kugudle kwaye kucoceke.
Ixesha lokuposa: Meyi-14-2021